Best Decred mgbanwe
Best Decred ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire Decred taa.
Best Buy price Decred $ 13.64 DCR/BTC Livecoin
Ahịa ahia kacha mma Decred $ 17.313610823 DCR/USDT Huobi
Ihe kachasị mma Decred ekpebisiri site na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na mgbanwe. Decred ọnụ ahịa mgbanwe ego ego na-ekpebi ọnụego mgbanwe. O dabere n’onyinye ma choro crypto a. Ọ dị mfe ịghọta na Decred ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla. Ihe kachasị mma Decred bụ nsonaazụ nke atụle ọnụego mgbanwe nke mgbanwe niile na-arụ ọrụ na ahịa ego ego n'oge ahụ.
Best Decred obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Decred na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Decred na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma Decred bụ echiche onwe onye nke ndị sonyere n'ahịa crypto na ndị na - ejide crypto. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ koodu mmemme ezubere maka nchekwa, ndozi, ịkwụ ụgwọ ego crypto. Kachasị Decred obere akpa nwere nchekwa kachasị mma na ntọala nche. A na-ekpebi ntụgharị kachasị mma Decred n'oge oge. A na-eme nyocha nyocha nke azụmaahịa zuru ezu na ịzụta na ire nke ego ego mgbe niile.
Ụlọ ahịa Decred kacha mma
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe e nwere ọnụahịa zụrụ nke Decred, mgbe ahụ ọ bara uru ịchọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe ego ego a. Egosiputara Decred nke kachasị mma na 28/05/2020 - dị ka tebụl ọnụego ahịa azụmaahịa niile maka nkewa nkewa na abawanye ma ọ bụ ibelata ọnụego. Ire kachasị ere na ịzụta Decred maka 28/05/2020 anyị debere ebe dị iche na ibe ahụ. N'ime tebụl ọnụego kachasị mma nke Decred ị ga - ahụ ọnụahịa dị iche iche nke Decred. You nwere ike ịhọrọ ndị kachasị mma, na mgbanwe ya ka mma ịchọta mgbanwe ego ego.
BTC USDT ETH KRW EUR VET BCH USD BRL Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Decred nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Huobi Global DCR/USDT $ 14.35 $ 55 794 -
Huobi Global DCR/BTC $ 14.34 $ 33 148 -
Huobi Global DCR/ETH $ 14.39 $ 14 255 -
Huobi DCR/BTC $ 17.20 $ 58 346.73 0.018907 %
Huobi DCR/USDT $ 17.31 $ 20 146.35 0.006528 %
Huobi DCR/ETH $ 17.13 $ 19 721.83 0.006391 %
CoinEx DCR/BTC $ 14.25 $ 543 985 -
CoinEx DCR/USDT $ 14.35 $ 468 551 -
CoinEx DCR/BCH $ 14.28 $ 301 412 -
Huobi Korea DCR/BTC $ 14.34 $ 1 -
Huobi Korea DCR/USDT $ 14.37 - -
Huobi Korea DCR/ETH $ 14.37 - -
BKEX DCR/BTC $ 14.34 $ 91 700 741 -
BKEX DCR/ETH $ 14.36 $ 2 232 645 -
BKEX DCR/USDT $ 14.37 $ 150 785 -
Bittrex DCR/BTC $ 14.38 $ 26 472 -
Bittrex DCR/USD $ 14.27 $ 4 825 -
Bittrex DCR/USDT $ 15.80 $ 1 904 -
OKEx DCR/USDT $ 14.34 $ 1 867 -
OKEx DCR/BTC $ 14.39 $ 134 -
OKEx DCR/ETH $ 14.34 $ 39 -
VCC Exchange DCR/BTC $ 14.59 $ 19 372 -
VCC Exchange DCR/USDT $ 14.85 $ 262 -
Gate.io DCR/USDT $ 14.29 $ 605 -
Gate.io DCR/BTC $ 14.58 $ 42 -
BiKi DCR/USDT $ 14.35 $ 2 187 148 -
BiKi DCR/BTC $ 14.30 $ 1 355 434 -
Braziliex DCR/BRL $ 15.91 $ 34 -
Braziliex DCR/BTC $ 17.27 - -
KuCoin DCR/BTC $ 14.35 $ 5 024 -
KuCoin DCR/ETH $ 14.35 $ 1 527 -
OceanEx DCR/USDT $ 14.37 $ 295 939 -
OceanEx DCR/VET $ 14.27 $ 294 383 -
MXC DCR/USDT $ 14.35 $ 1 438 510 -
Hotbit DCR/BTC $ 14.12 $ 8 912 -
Bitvavo DCR/EUR $ 14.37 $ 9 487 -
ZG.com DCR/BTC $ 14.14 $ 7 761 806 -
CoinDCX DCR/BTC $ 14.24 $ 3 421 -
FEX DCR/BTC $ 14.40 $ 2 962 644 -
BitAsset DCR/USDT $ 14.38 $ 1 370 -
LATOKEN DCR/BTC $ 14.22 $ 63 063 -
Poloniex DCR/BTC $ 14.35 $ 786 -
Coinall DCR/BTC $ 14.29 - -
Upbit DCR/KRW $ 14.13 $ 260 859 -
ProBit Exchange DCR/KRW $ 14.07 $ 33 994 -
HitBTC DCR/BTC $ 14.30 $ 2 025 -
Binance DCR/BTC $ 14.35 $ 148 331 -
DragonEX DCR/USDT $ 14.69 $ 1 009 023 -
Livecoin DCR/BTC $ 13.64 $ 360 -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma Decred mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. Anyị gosipụtara ọnụahịa azụmaahịa kachasị mma maka Decred maka ụdị ego ọ bụla dị, na ọnụahịa kacha ala na dollar. Ọnụahịa kachasị mma nke Decred maka taa - anyị na-egosi na elu peeji nke ọrụ a. A na-egosi dollar Decred na dollar. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa crypto kacha mma e nwere njikọ nke gbanwere ebe a na-ere Decred na ọnụahịa a kachasị mma.
Mgbanwe crypto kachasị mma maka ire na ịzụ Decred nọ na tebụl ọrụ dị na weebụsaịtị anyị. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ Decred. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Nyocha nke mgbanwe ego dị iche iche n'elu tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma na-enye gị ohere ịhụ Decred azụmahịa azụmahịa na ego ego ọzọ ma ọ bụ ego mba. A na-emelite peeji maka ụdị mgbanwe kacha mma maka ịzụ na ire Decred. ahia crypto na - aga n'ihu.